ပင်မလိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ၊ ရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏ပံ့ပိုးမှုများ - Meta-analysis (2019) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
တစ်ဦးက Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2019): လိင်သဘောထားခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖို့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ Exposure ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ
မှတ်ချက်များ YBOP: ဒီစာရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ခံအချို့ရှိတယ်။ (ထို Abstract အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနိဂုံးမှကောက်နုတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ) ။ အဆိုပါစိတ္တဇဒီဘာသာရပ်အပေါ်တစ် ဦး တည်းသာအခြား Meta-analysis သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခြားစာတမ်းများအရ“ မီဒီယာများ၏ဆယ်ကျော်သက်လိင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသုညသို့နီးကပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းကိုခရစ်စတိုဖာဂျေဖာဂူဆန်ကပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်။ Sexy မီဒီယာဆယ်ကျော်သက်လိင်မြှင့်တင်ပါသလား? တစ်ဦးက Meta-Analytics နဲ့အတိုင်းအတာများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2017)
အပြင်းအထန်အဆိုပါ ICD-11 ထဲကအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်နှစ်ပေါင်းအဘို့, ဖာဂူဆန်, အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အယူအဆတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (သူ 2018 တကား, မိမိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအများအပြားမျက်နှာစာပေါ်ဆက်လက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ) တကယ်တော့ဖာဂူဆန်နှင့်နီကိုးလ် Prause ခုနှစ်တွင် အဓိကစက္ကူပေါ်မှာ Co-စာရေးဆရာများအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုစီရင်ချက်ကိုပယ်ရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ (သူတို့အခိုင်အမာအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်စာတမ်းများတစ်စီးရီးအတွက် debunked ခဲ့ကြသည် ၏ဤပြဿနာ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်.)
ဒီနေရာမှာအောက်ပါ meta-analysis ၏စာရေးဆရာများကဖာဂူဆန်၏သံသယဖြစ်ဖွယ်အချက်အလက်များရွေးချယ်မှုကသူ၏ရလဒ်ကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။
စိတ္တဇနှင့်လင့်ခ် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ် (2019)
Coyne စာရာအမ်, အယ်လ် Monique ရပ်ကွက်, Savannah အယ်လ် Kroff, Emily ဂျေ Davis က, Hailey G. အ Holmgren အလက်ဇန္ဒား C. ဂျင်ဆင်စာရာအီးနိုင်ကြောင်းနှင့် Lee ကဒဗလျူ Essig ။
သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ nonexplicit ပုံဖော်ခြင်းမှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိတွေ့မှု "sexy မီဒီယာ" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရန်အနည်းငယ်သာရှိပြီးမှအကြံပြုသောဤခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးတည်းသာ Meta-analysis သည်ရှိ၏။ အဲဒီမှာန့်အသတ်များစွာတည်ဆဲ Meta-analysis သည်ဖြစ်ကြောင်း, ဤ updated Meta-analysis သည်၏ရည်ရွယ်ချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်သုံးစွဲသူများက '' သဘောထားတွေမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့ပဲ။
59 လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရလဒ်များ, 394 အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်တစ်ဦးအသေးပေမယ့်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှား; အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားအခြားမီဒီယာသက်ရောက်မှု Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဆိုးကျိုးများပေါ်ထွက်လာလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အဘို့ခွန်အားကြီးကြ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သက်ရောက်မှုအနက်ရောင်ပါဝင်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမိန်းကလေးတွေထက်ယောက်ျားလေးတွေနှင့်အဖြူသင်တန်းသားများအဘို့ခွန်အားကြီးကြ၏s.
ဒီလေ့လာမှုက nonexplicit လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ မိဘများ, မီဒီယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်သုတေသီများအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ Meta-analysis သည်အကျိုးစီးပွားအားလုံး variable တွေကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများသရုပ်ပြပေမယ့်အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအနည်းငယ် variable တွေကိုအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ အများစုကအထူးသအပေါင်းတို့, အသက်အရွယ်အဘို့အသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုသရုပ်ကြ၏ သို့သော် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကောင်းအဟောင်းတွေသင်တန်းသားများကိုဖွယ်ရှိငယ်ရွယ်သောသင်တန်းသားများကိုထက်အပေါ်ကိုဆွဲဖို့ပိုနှိုင်းယှဉ်, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအတွေ့အကြုံရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထင်ဟပ်, ထွန်းသစ်စလူကြီးများအတွက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အကြီးစားထက်ပိုမိုခဲ့ [36, 37] ။ ထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအထီးအဘို့အအားကောင်းခဲ့သည်, ဖြစ်ကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်  ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုကိုက်ညီခြင်းနှင့်အထီးဇာတ်ကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်  ကိုလျော့နည်းမကြာခဏအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ထက်အပြစ်ပေးကြောင့်ကြောင့်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအနက်ရောင်သင်တန်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအဖြူသင်တန်းသားများကိုများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အနက်ရောင်လူငယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာများ၏အများစုအဖြူဇာတ်ကောင်နှင့်အတူလျော့နည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားသတ်မှတ်စေခြင်းငှါမျှော်မှန်းထားတဲ့လူမှုသိမြင်မှုသီအိုရီ  ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူ aligns ။